Shina 7 oz 200ml fihodinana amam-baravarankely fitaratra azo avy amin'ny vera Yogurt Jar miaraka amin'ny orinasa Lid sy mpamatsy | Hoyer
7 oz 200ml Filazana boribory vita amin'ny vera Jar Jar Jarurt miaraka amin'i Lid
Kalitao avo lenta: vita amin'ny vera vita amin'ny soda-lime ny tavoahangy fitaratra, LEAD-FREE, mateza, stabil, hita maso, miaraka amin'ny sela plastika BPA-GRATIS, izay ahafahanao mihidy tsara ao anaty vata fampangatsiahana ary tehirizina mandritra ny fotoana maharitra.
Haavo: 76mm / 3 santimetatra
savaivony: 70mm / 2.75 santimetatra
vozony: 66mm / 2.6 santimetatra
DIY arakaraka ny tianao indrindra: Raha mila izany dia afaka manome anao tady sy tady ho anao izahay hametahana azy amin'ny volavolanao manokana, azonao atao ny mitahiry hena, yaorta, ronono na kitapo-tanana. Miaraka amin'ireo tarehin-tarika sy tady azontsika dia ho fanomezana lehibe ho an'ny fianakavianao na namanao, asio sakafo vita tànana ao anatiny, afaka mankafy ny tsindrin-tsakafo kely ny tsirairay. Azonao atao koa ny mampiasa azy ho an'ny labozia, fa tsy misy ny plastika plastika.
Tombo-kohan'habakabaka: Ity siny kely ity dia azo fehezina mafy 100% ary tsy misy afaka mivoaka ao, miaraka am-pahamendreha feno ny sakafo dia afaka mametraka mandritra ny fotoana maharitra. Azonao atao ny haingo ny lakozia na ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ireny siny, dia ho toerana mahafinaritra ao an-trano.
Azo averina: Ny tapany fitaratra sy ny kapo plastika dia sokajy sakafo, aorian'ny sakafo ampiasaina, manadio azy ireo fotsiny ary afaka ampiasaina foana izy ireo mandritra ny taona maro.
Size Boky: 200ml Haavo: 76mmDiameter: 70mm Neck: 66mm Boky: 7 oz Haavo: 3 santimetatraDiameter: 2,75 santim-bolo: 2.6 santimetatra
Previous: 4 oz 100 ml Hazo mametaka tavoahangy 100 vera miaraka amin'ny Lid
Manaraka: Tavoahangy tavoahangy feno tavoahangy 100ml miaraka amin'ny tavoahangy